Tsy Maharesy Lahatra ny Antoka Nomen’i Taïwan Momba ny Fiarovana ara-nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2011 13:55 GMT
Vokatry ny loza nokleary tao Fukishina, Japana, nangatahana ankehitriny ny hijerena indray ny politikan'ny angovo nokleary ao Taïwan, ary izany dia amin'ny fomba manokana satria ny toby nokleary faha-efatra dia eo an-dalam-panamboarana ihany koa.
Lin Tsung-yao (林宗堯), mpikambana ao amin'ny Komity mpanara-maso ny Fiarovana ny toby nokleary fahaefatra, dia nangataka tamin'ny orinasa Taiwan Power mba hanao fanadihadina lalina momba ny fanamboarana ny toby nokleary fahaefatra :
核四廠卻是「拼裝產品」台電發包設計，國內採購制度最常採取低價標. 因產品採購時間及品質不一， 整個興建工序混亂目前進入試運轉，也面臨原始顧問公司及「奇異」解約問題，缺乏有經驗的顧問監督。
Fitambaran-toby maromaro ny toby nokleary faha-efatra… Ny orinasa Taiwan Power ihany no namorona ny toby ary niandraikitra izany. Raha nividy ireo kojakoja tao Taïwan izy, dia nisafidy ny hividy izany amin'ny vidiny mora kokoa amin'ny ankapobeny. Satria ireo kojakoja ireo dia efa novidiana tamin'ny vanim-potoana samihafa ary amin'ny endriny isan-karazany, nampidi-doza ny dingana nanamboarana ny toby … Ankehitriny, efa manomboka ny andrana fa saingy mbola miatrika olana izahay toy ny fanafoanana ny fifanekena tamin'ny orinasa mpanoro-hevitra tahaka ny orinasa General Electric. Araka izany, tsy manana mpanoro-hevitra matihanina intsony izahay, na mpanara-maso ny toby.
Evette, Bilaogera ao Roodo, miahiahy koa ireo olana izay mety mbola hiseho amin'ny fanakambanana ny toby:
Mpahaikanto (designer) momba ny indostria aho. Marina tokoa fa ireo orinasa mpamokatra toy ny Hitachi, Toshiba, Mitsubishi et Fuji dia tsy mampiasa izany rafitra desimaly izany amin'ny fitsipiky ny asany. Fantatry ny olona tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana ny rafitra ihany ny fahasamihafan'ny 0.5 mm amin'ny kojakoja amboarin'ireo orinasa isan-karazany. Afaka mieritreritra mora foana isika fa raha mampiasa kojakoja maromaro namboarin'ireo orinasa betsaka mba hanambarana ny toby nokleary, dia tsy mora mihitsy ny mitantana ny zava-doza izay mety ateraky ny fanamboarana diso. Tsy mora fehezina tahaka izay mitranga amin'ny fahadisoana amin'ny fanamboarana finday ny fiantraikan'ny fahadisoana tahaka izany, satria amin'ny iray dia mora ny mandrafitra finday hafa indray.
Na dia eo aza ireo olana ara-pilaminana, nanambara ny Filoha Taïwaney Ma Ying-jeou fa ny governemanta dia efa nitsipaka ny fangatahan'ireo solombavambahoaka mpanohitra mba hanajanona ny tetikasa izay tokony hatao amin'ny taona 2012.
Summerlake, bilaogeran'ny Roodo, nitaraina fa tsy novalian'ny governamanta ny ahiahin'ireo matihanina :
Tsy ataon'ny governemanta ho toy ny zava-dehibe ny hevitr'ireo matihanina. Mifanohitra amin'izany, heveriny fa toy ny “ahiahin'ny hafa” ka tsy tokony ho fantarina raha tsy efa mazava tsara.
, Ny toerana anamboarana ny toby nokleary fahaefatra. Sary nahazo fanomezana alalana avy amin'ny Muhchyng sy ny licence Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
Etsy andaniny , efa nangatahana tamin'ny Taiwan Power , orinasa tantanin'ny fanjakana izay mpamokatra herinaratra lehibe indrindra ao Taïwan sy ny mpandraharaha manao ampihimamba ny herinaratra, izay mety ho ataony raha toa ka mety hitranga ao Taïwan koa ny loza mitovy tao amin'ny toby nokleary ny Fukushima, nanambara i Taiwan araka izany fa handray fepetra hentitra mba hanakanana ny tranga toy izany tsy hiharatsy. Manontany tena ilay bilaogera Summerlake matetika raha mety ampiharina ao Taiwan izany “fepetra henjana” izany:
Ahoana no ahazoan'ny olom-pirenena tombony amin'io fepetra hentitra voalazan'ny orinasa Taiwan Power sy ny Filankevitry ny Angovo atomika io ? mety hanao faritra amoahana ny taratra 5 km (na koa maherin'ny 10 km) izy ireo. Fanampin'izany, dia tsy hijery mihitsy ireo fomba tokony amoahana ireo olona ao izy ireo. Raha miseho izany toe-javatra izany, ary raha mila faritra fivoahan'ny taratra 20 km isika, dia mety hampiditra ny tanànan'i Taipei izy ireo. Raha sanatria ka tonga izany, mihevitra ireo mpiaro ny tontolo iainana fa mponina 1.6 tapitrisa no ho voakasika amin'izany fivoahana izany. Raha tsy mandinika izany zavatra izany ny orinasa Taiwan Power sy ny Filankevitry ny Angovo atomika, ahoana no ilazany fa hahazo tombony ny olom-pirenena?
Ny tian'ireo orinasa Taiwan Power sy ny Filankevitry ny Angovo Atomika lazaina dia mety hiteraka fahasimbana mitovy amin'ny horohorontany ny loza ateraky ny toby nokleary. Kanefa, raha misy loza ao anatin'ny toby nokleary, maharitra an-taona maro ny fifindran'ny taratra “radioactive”, sy ny fiparitahan'ny vovoka “radioactive”.
Raha mijery ny valin-tenin'ny orinasa Taiwan Power manoloana ireo fanontaniana mikasika ny olana momba ny Fiarovana ny toby nokleary fahaefatra napetrak'i Yoichi Kikuchi, nilaza i Chiong-Yue Li fa:
Mipetraka amin'ny fitompoan-teny fatratra ny orinasa Taiwan Power ny mety hisian'ny krizy lehibe indrindra momba ny Fiarovana ara-nokleary .